I-Polyquaternium-22 Abakhiqizi Nabahlinzeki - I-China Polyquaternium-22 Factory
I-Polyquaternium-22 iyi-cationic co-polymer eshajwa kakhulu ekwazi ukubonisa kokubili izici ze-anionic kanye ne-cationic.Le-co-polymer ibonisa ukuzinza okuhle kakhulu kwe-pH futhi ilungele ukusetshenziswa njengama-polymers afaka isimo emikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele nesikhumba.Ama-copolymers anconywa ukuthi ngcono izindawo ezimanzi nezomile zemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele, kanye nokuthuthukisa umuzwa emikhiqizweni yokunakekelwa kwesikhumba.
I-Polyquaternium-22 isiza ukushelela, ukuthambisa nokunotha ekwakheni. Ithuthukisa ukuhlangana okumanzi ekwakhekeni kwe-shampoo futhi iphinde ithuthukise ukuphathwa kahle kwezinwele. Inikeza isikhumba ukuzwa okubushelelezi, okuthambile futhi inikeza ukuswakama okuhle kakhulu. Ibonisa umuzwa omuhle kakhulu wesikhumba sangemva kokugeza futhi inciphisa ukucinana ngemva kokoma kwesikhumba. Imikhiqizo yegwebu lokugeza ithola igwebu elicebile ngokuzinza okuthuthukisiwe.